Qatar: Argagixisada la sheegay waa been - BBC News Somali
Qatar ayaa gaashaanka u daruurtay kuna tilmaantay mid aan sal laheyn liis cusub oo argagixiso oo ay shaaciyeen afar dal oo Carab ah oo xiriirka dalkaasi ugu jaray eedo ah inay taageerto kooxaha xagjirka ah.
Sucuudi Carabiya, Isutagga Imaaraadka Carabta, Masar iyo Baxrayn ayaa 60 qof oo cusub iyo 12 hay'adood ku daray liiska kooxaha xiriirka la leh Qatar.
Hasayeeshee Qatar ayaa sheegaysa in mowqifkeeda ladagaalanka argagixisada uu ka xooggan yahay qaar ka mid ah afartaas dal.
Bayaan ay soo saartay dowladda Qatar ayaa lagu sheegay in ay cambaaraynayso nooc walba oo argagixiso ah ayna gobolka ku hogaamiso dagaalka xidida loogu siibayo dhibaatada, sida in ay shaqooyin abuurtay iyo inay waxbarasho siisay kumannaan qaxootiga Suuriyiin ah.
Qadar oo wacad ku martay in aysan 'is dhiibi doonin'
Goor sii horreysay, Masar ayaa ugu baaqday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay inuu baaro eedaha ah in Qatar ay ilaa iyo hal bilyan oo doolar ay siisay kooxo xagjir ah oo ay ku soo furatay xubno ka tirsan qoyska boqortooyada, kuwaas oo la qabsaday iyagoo ugaarsi u joogay dalka Ciraaq.